Spain Oo Markii Ugu Horeeysay Taariikhda Ka Badisay France Tartan Caalami Ah Kana Ciribtiray Koobka Euro 2012.
DONETSK, Ukraine (AP) Labo gool uu dhaliyay ciyaaryahan Xabi Alonso ayaa xulka spain wuxuu 2-0 ugu badiyay dalka Faransiiska kulan ka tirsana wareega koobka qaramada yurub 2012.
Spain ayaa Semefinalka koobkan la kulmayso dalka Portugal oo isna kasoo badiyay dalka Czech,waxana dalka Spain uu rajo ka leeyahay inuu ka hortaggo qorshe kasto oo looga hor istaagayo inuu koobkan qaado.
Horyaalka Yurub dalka ah Spain ayaa caawa kulanki ay la ciyaareen Faransiiska uu ahaa mid adag iyadoo ay jireen fursado ay iska khasaariyeen xidigaha France.
Xabi Alonso oo ahaa dhaliyihii labada gool kulankaan ayaa waxaa uu kulankaan u ahaa kiisa 100-aad ee uu u ciyaaro dalkiisa Spain,waxana labada gool uu dhaliyay ay u noqonaysaa inuu xulka qaranka Spain u dhaliyay 15 gool.
Goolka 1-aad ee ciyaaryahan Alonso ayaa dhashaday daqiiqaddii 19-aad halka kan 2-aad oo dhamaystiray rajadii ay xulka Faransiiska kusooo gabo gabeeyay inay inay isaga haraan koobka yurub ee qaramada,waxaana dhacday in dhamaystir la’aan haysatay kooxda france lagu tilmaami karo inay tahay warar aan jirin.
“waa ogaa inay ahayd ciyaartaan mid muhiim ah loona ciyaaro si wanaagsan ayuu yiri Alonso.
Xabi Alonso goolashan uu u dhaliyay dalkiisa ayaa ka dhigan markii ugu horeysay oo Spain ay ka badiso dalka France waxaana Faransiiska uu labo jeer uu ka reebay koobka Euro sanadihii 1984 iyo 2000 labadas jeerna waxaa qaaday dalka France iyadoo koobkii adduunka 2006 France ay ku badisay 3-1 oo Spain wareegga 8-da koobka adduunka.
Dalka Spain ayaa waxaa uu seme finalka koobkan la ciyaaraya dalka Portugal oo ah dalkii ugu horeeyay ee soo gaara afar dhamaadka Euro 2012.waxaana ciyaartaas ay ka dhacaysaa magalada Donestk waxaana Spain ay raadinaysaa guusheedii 3-aad oo koobkaan ay ka gaarto.
“markii lagaa badiyo ciyaar oo aad wayso kasii ciyaaridda koob waa hubaa in taas ay sii xoojin doonto dhanka awoodda farsamo oo kooxda ay iska dhisi doonto ayuu yiri Tababare Lauren Blanc oo ah macalinka Faransiiska.
Wuxuu intaaa ku daray Blanc in ciyaartooydiisa ay sameeyen wax walbo si ay guul u gaaaraan laakin ay ku adkaatay in Spain ay dhaafaan oo goolal ka dhaliyaan.
Tababare Blanc ayaa ku nuux nuuxsaday in ay hakiyeen sida uu yiri weerarka dhinacyada ama garbaha taasna ay ku guulaysteen laakin qadka dhexe ay caqabad ku noqotay.
Goolkii 1-aad ayaa waxaa uu ahaa mid ay isku soo dhaaftay xidigaha Iniesta iyo Jordi Alba kadibna uu hellay Alonso kaas oo madax ku dhaliyay waxaana uu ku dhaliyay si fudud xidiga qadka dhexe Real Madrid oo aan la kulmin daafaca xulka Fransiiska.
Sidoo kale kadib ciyaartaan waxa hadlay Tababare Del Bosque oo kulankan u soo saaray xulkiisa heerka 4-ta waxaana wuxuuna sheegay In ay si fiican u yaqanaan xidigihiisa sida loo abuuro iyo sida loo dhaliyo kubadaha taasna ay tahay sababta uu dalkiisa u noqday dalka ugu wanaagsan yurub iyo caalamka.
Alonso ayaa qalday gool haye Hugo Llores markii uu dhalinayay rigooraha wuxuuna fiirinayay midig wuxuuna kuabdda ka dhaliyay bidix,waxaana caawa dalka fransiiska si weyn ugu dhex muuqday ciyaaryahanka NewcastleCapaye oo laad xoogan uu ka bixiyay Casilas gool hayaha wadanka Spain.
Xidigihii ciyaarayay kulankaan.
France: Hugo Lloris, Anthony Reveillere, Adil Rami, Laurent Koscielny, Gael Clichy, Mathieu Debuchy (Jeremy Menez, 65), Yohan Cabaye, Yann M'Vila (Olivier Giroud, 79), Florent Malouda (Samir Nasri, 65), Franck Ribery, Karim Benzema. DONETSK, Ukraine (AP) Labo gool uu dhaliyay ciyaaryahan Xabi Alonso ayaa xulka spain wuxuu 2-0 ugu badiyay dalka Faransiiska kulan ka tirsana wareega koobka qaramada yurub 2012.
Horyaalka Yurub dalka ah Spain ayaa caawa kulanki ay la ciyaareen Faransiiska uu ahaa mid adag iyadoo ay jireen fursado ay iska khasaariyeen xidigaha France.Xabi Alonso oo ahaa dhaliyihii labada gool kulankaan ayaa waxaa uu kulankaan u ahaa kiisa 100-aad ee uu u ciyaaro dalkiisa Spain,waxana labada gool uu dhaliyay ay u noqonaysaa inuu xulka qaranka Spain u dhaliyay 15 gool.
Goolka 1-aad ee ciyaaryahan Alonso ayaa dhashaday daqiiqaddii 19-aad halka kan 2-aad oo dhamaystiray rajadii ay xulka Faransiiska kusooo gabo gabeeyay inay inay isaga haraan koobka yurub ee qaramada,waxaana dhacday in dhamaystir la’aan haysatay kooxda france lagu tilmaami karo inay tahay warar aan jirin.“waa ogaa inay ahayd ciyaartaan mid muhiim ah loona ciyaaro si wanaagsan ayuu yiri Alonso.
Dalka Spain ayaa waxaa uu seme finalka koobkan la ciyaaraya dalka Portugal oo ah dalkii ugu horeeyay ee soo gaara afar dhamaadka Euro 2012.waxaana ciyaartaas ay ka dhacaysaa magalada Donestk waxaana Spain ay raadinaysaa guusheedii 3-aad oo koobkaan ay ka gaarto.“markii lagaa badiyo ciyaar oo aad wayso kasii ciyaaridda koob waa hubaa in taas ay sii xoojin doonto dhanka awoodda farsamo oo kooxda ay iska dhisi doonto ayuu yiri Tababare Lauren Blanc oo ah macalinka Faransiiska.
Wuxuu intaaa ku daray Blanc in ciyaartooydiisa ay sameeyen wax walbo si ay guul u gaaaraan laakin ay ku adkaatay in Spain ay dhaafaan oo goolal ka dhaliyaan.Tababare Blanc ayaa ku nuux nuuxsaday in ay hakiyeen sida uu yiri weerarka dhinacyada ama garbaha taasna ay ku guulaysteen laakin qadka dhexe ay caqabad ku noqotay. Goolkii 1-aad ayaa waxaa uu ahaa mid ay isku soo dhaaftay xidigaha Iniesta iyo Jordi Alba kadibna uu hellay Alonso kaas oo madax ku dhaliyay waxaana uu ku dhaliyay si fudud xidiga qadka dhexe Real Madrid oo aan la kulmin daafaca xulka Fransiiska. Sidoo kale kadib ciyaartaan waxa hadlay Tababare Del Bosque oo kulankan u soo saaray xulkiisa heerka 4-ta waxaana wuxuuna sheegay In ay si fiican u yaqanaan xidigihiisa sida loo abuuro iyo sida loo dhaliyo kubadaha taasna ay tahay sababta uu dalkiisa u noqday dalka ugu wanaagsan yurub iyo caalamka. Alonso ayaa qalday gool haye Hugo Llores markii uu dhalinayay rigooraha wuxuuna fiirinayay midig wuxuuna kuabdda ka dhaliyay bidix,waxaana caawa dalka fransiiska si weyn ugu dhex muuqday ciyaaryahanka NewcastleCapaye oo laad xoogan uu ka bixiyay Casilas gool hayaha wadanka Spain. Xidigihii ciyaarayay kulankaan. Spain: Iker Casillas, Alvaro Arbeloa, Gerard Pique, Sergio Ramos, Jordi Alba, Xavi Hernandez, Sergio Busquets, Xabi Alonso, David Silva (Pedro Rodriguez, 65), Andres Iniesta (Santi Cazorla, 84), Cesc Fabregas (Fernando Torres, 67). France: Hugo Lloris, Anthony Reveillere, Adil Rami, Laurent Koscielny, Gael Clichy, Mathieu Debuchy (Jeremy Menez, 65), Yohan Cabaye, Yann M'Vila (Olivier Giroud, 79), Florent Malouda (Samir Nasri, 65), Franck Ribery, Karim Benzema. Ahmed Mooge